HERBICIDE "GEZAGARD": TILMAAMAHA ISTICMAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Tilmaamaha isticmaalka daroogada "Gezagard" ee beerta
Drug "Gezagard" - Herbicide ka shirkadda Swiss "Singenta", taas oo loo isticmaalo in lagu ilaaliyo dalagyada khudradda badan oo ka yimaada haramaha sanadlaha iyo firileyda.
Foomka iyo sharaxaadda
Qalabka waxaa lagu heli karaa qaab ka mid ah ganaaxyo fara badan oo qasacadaysan oo leh miisaan 5 l, 200 l ama 100 ml, 300 ml oo fuudh ah. Geedka xawayaanka wuxuu leeyahay ficil isku dhafan, oo loogu talagalay burburinta firileyda, cawska sanadlaha ah iyo cawska. Waxaa si fiican u nuugay nidaamka xididka iyada oo aan waxyeello geedka. Qalabkani waxaa loogu talagalay wax qabadka ilaalinta baradho, dhirta, gabbaldayaha iyo dalagyada kale ee qudaarta.
Dhimashada haramaha, geedaha soo socda ayaa loo isticmaalaa: Stomp, Uragan Forte, Zenkor, Reglon Super, Agrokiller, Lontrel-300, Lazurit, Ground iyo Roundap.
Prometrin - Tani waa qayb ka mid ah firfircoon ee nooca geedaha (500 g / l). Waxay ku nuugto caleemaha iyo xididdada cawska, waxayna keenaysaa joojinta qaabka sawirqaadaha, taas oo ah natiijada dhirtu ay dhinto.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee isticmaalka
Gezagard haysta Qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee ka jira dhirta kale:
ilaalinta muddada dheer;
aagga lagu daaweeyo ee mustaqbalka, waxaad dhali kartaa beero kasta;
codsiyo badan oo kala duwan;
ku haboon goobaha cimilada ee kala duwan;
wuxuu leeyahay saameyn doorasho ah, sidaa darteed amaan u ah "dhirta" faa'iido leh.
Tilmaamaha: sicirrada isticmaalka iyo habka loo isticmaalo geed-geedka "Gezagard"
Hadda oo aan ka wada hadalnay foomka sii-deynta iyo faa'iidooyinka ee Gezagard, aan ka hadalno tilmaamaha isticmaalka.
Iyadoo ku xiran tirada cawska, cabirida qadarka lacagta ee loo baahan yahay iyo walxaha ku dhaji 10 litir oo biyo ah. Xalka waxaa lagu buufiyaa ciidda cimilada.
Waa muhiim! Ha daboolin kala dheereynta ka dib markii ay ku buufinayaan, maadaama ay tani yarayso waxtarka miraha.
Wixii soo noqoshada digirta iyo toonta, isticmaal 40 ml 10 litir oo biyo ah. Moobeyl waa la fuliyaa ka dib markaad beertid.
Si loo buufiyo baradhada, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 75 ml daroogo 10 litir oo biyo ah. Isticmaal ka dib markaad degto.
Wixii soo saaridda heerka sicirka cunnada - 2 litir 1 gaaban. Moobeyshaha waxaa lagu fuliyaa ka hor inta beero, isku mar la leh beero ama ka hor biqilka.
Karootada waxaa la buufiyaa ka hor inta beero. U diyaargaroobida xaddiga 50 ml 10 ml oo biyo ah.
Ma taqaanaa? Intii uu socday dagaalkii Jarmalka, dabacasaha waxay ka sameeyeen qaxwaha askar ka sameysan khudaarta cagaaran.
Greens (dhir, celery, dill)
Greens waxaa la buufiyaa ilaa biqilka. Si loo daweeyo agagaarka dabacasaha, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho 2 litir oo xal ah.
Isku daadinta soy soo saarka ka hor biqilka dhaqanka. Isticmaal 2.5 litir halkii 1 ha.
Beans iyo Vika ayaa lagu buufiyaa 2-3 maalmood ka hor biqilka. Isticmaal xalka adoo diirada saaraya 60 ml 10 litir oo biyo ah.
Maqasyada lafaha iyo buundooyinka waxay ku qaataan dhaqanka. Codso 3 litir oo xal ah halkii 1 ha.
Ma taqaanaa? Laabashadu waxay ka kooban yihiin borotiin ka badan hilibka.
Herbicide waxaa loo isticmaali karaa diyaarinta ciidda ka hortagga cawska, laakiin kaliya haddii aad qaadato imtixaan la isku darayo.
Badeecadu ma aha phytotoxic haddii loo isticmaalo kaliya qiyaasta saxda ah ee ay soo jeediyaan soo saarayaasha.
Herbicide waxaa loo kaydiyaa 3 sano meel qalalan oo heerkul ah ilaa 35 ° C.
Waa muhiim! Daawada ka ilaali meel ka fog carruurta.
Herbicide "Gezagard" oo ku habboon in la isticmaalo dhaqan kasta oo uu leeyahay faa'iidooyin badan, taas oo u mahadcelineysa taas oo u qalantaa dareenka.